Tsy maintsy mahita filma nalefa any New York City
TV & Film Lisitry ny sarimihetsika tsara indrindra
15 amin'ny filalaovana tsara indrindra ao New York City
Ny Big Apple dia sarimihetsika sarimihetsika, fotoana sy indray
Ny New York City dia toerana mahatalanjona toy izany, tsy mahagaga raha ny horonan-tsary tsy tambo isaina no nifidy ny tanàna ho toy ny toerana tonga lafatra. Miaraka amin'ireo toeram-pitrandrahana goavam-be, zaridaina mahavariana, ary arabe miorina amin'ny tantara, ny tanàna dia lasa toetra sy ny tenany.
Jereo ireo horonan-tsary fatratra amina horonantsary miisa dimy izay manana NYC amin'ny endriny feno voninahitra sy indraindray.
Ny alakamisy maraina tao Tiffany (1961)
Amin'ny alalan'ny Getty Images / John Kobal Foundation.
Nandika izany tantara izany i Blake Edwards, izay nifototra tamin'ny bokin'i Truman Capote tamin'ny anarany. Audrey Hepburn dia manome ny iray amin'ireo asa goavana sy mahatalanjona indrindra amin'ny asany, toa an'i Holly Golightly, namana sosialy naïvie, izay mifankatia amin'ny tanora mpanoratra izay mandroso ao amin'ny tranoben'ny NYC. Ny fitiavan-dry zareo anefa dia notandindomin-doza tamin'ny alàlan'i Holly-niasa ho toy ny akofa ambony izy tamin'ny fiezahana hametraka olon-dehibe manan-karena.
Ny ankamaroan'ny hetsika dia atao ao amin'ny fivarotana lehibe Tiffany & Co. ao Fifth Avenue. Ireo sarin'ireo ivelany ireo dia nalaina tao amin'ny toerana iray tany New York, raha ny filalaovana anatiny dia nalaina tao amin'ny Paramount Studios tany Hollywood, Californie.
Taorian'ny 12 taona i Josh dia naniry ny hanam-bintana fiara fitaterana karnavaly, dia nifoha tamin'ny fomba mahagaga izy tao anatin'ny vondron'ny olon-dehibe matihanina (Tom Hanks). I Josh dia nandao ny fiarovana ny tranony tany New Jersey renivohitra ary nandositra nankany New York City, toerana izay ahafahany mamelon-janaka amin'ny zava-dehibe rehetra atolotry ny tanàna.
Iray amin'ireo sehatra malaza indrindra amin'ity sarimihetsika ity dia natao tao amin'ny fivarotana mega-toys FAO Schwarz ao amin'ny Fifth Avenue. Azonao atao ny mijery ity piano malaza FAO Schwartz eto ity, ao amin'ny YouTube. Ny toerana hafa dia ny seranan'i JFK, ny St. James Hotel, ary ny Strip House Grill.
Amin'ny alàlan'ny Getty Images / Sunset Boulevard.
Melanie Griffin dia milalao an'i Tess McGill, sekretera manana tanjona. Rehefa nangalatra ny heviny momba ny fandraharahana ny lehiben'ny mpanao ratsy (nilalao tamin'ny Sigourney Weaver mahagaga), dia niezaka ny hangalatra izany izy amin'ny alahelony amin'ny asany amin'ny asany.
Tess dia manao ny tranony any Staten Island, ary misy sehatra maromaro mampita ny sambo mankany Manhattan. Ny Statuette of Liberty dia aseho matetika ao amin'ny sarimihetsika. Ny seho an-tseraseran'ny birao dia nalaina tao amin'ny State Street Plaza sy ny World Trade Center 7, toerana izay rava nandritra ny fanafihana tamin'ny 11 septambra 2001. Ireo tilikambo tandroka dia nasongadina be tao anatin'ilay horonantsary.
Raha toa i Harry Met Sally (1989)
"Hanana izay ananany aho.". Via YouTube
Ny fitantaràn'i Rob Reiner, mpampihorohoro romantique, dia fitiavana am-pitiavana ho an'ny NYC. Navoakan'i lifelong New Yorker Nora Ephron, sarimihetsika nalaina avy ao an-tanàna tanteraka ilay sarimihetsika ary misy toerana maro tsy hay hadinoina, anisan'izany ny Washington Square Park Arch, Village Greenwich, ny Loeb Boathouse (sy ny toerana hafa any amin'ny kianja Central Park), ny renivohitry Metropolitan Art, ary ny Park Plaza Hotel.
Angamba ny sehatra malaza indrindra, izay i Meg Ryan no mitazona ny "O" lehibe ho an'i Billy Crystal manaitra, dia niseho tao amin'ny Delicatessen Katz tao amin'ny Village Village. Azonao jerena eto amin'ny Youtube ity sehatra ity.
"Nokapohiny aho.". Via YouTube
Nosoratan'i Dan Aykroyd sy Harold Ramis, izay nibanjina an'i Bill Murray sy Ernie Hudson, ity sarimihetsika ity dia iray amin'ireo sarimihetsika mampihetsi-po tamin'ny taona 1980. Ao anatin'ilay sarimihetsika, dia manomboka orinasa iray ireo manam-pahaizana momba ny parapsychologie teo aloha mba hanesorana ireo orana amin'ny toerana samihafa manerana an'i New York.
Raha nisy sary vitsivitsy notontosaina tany Los Angeles, dia nandray anjara lehibe tamin'ny hetsika ny Big Apple. Ny trano fiarovana izay napetrak'ireo Ghostbusters voatifitra dia tena lozam-pifamoivoizana: 8 Hook and Ladder tao amin'ny 14 Street North North, ary sary vitsivitsy monja no notifirina tao amin'ny Tranombokim-bahoaka New York ao amin'ny Fifth Avenue. Hita ihany koa ny Anjerimanontolon'i Columbia sy Central Park.
Iray amin'ireo seho malaza indrindra nalaina tao amin'ny trano famakiam-boky ny iray izay nahatonga an'i Dr. Venkman (Murray) ho "novonoina". Azonao jerena eto amin'ny Youtube ity sehatra ity.
Amin'ny alalan'ny Getty Images / © Robert Holmes / Corbis / VCG.
Ity tantara mampihetsi-po ara-psikolojika ity dia nosoratana sy notarihin'ny Roman Polanski, mifototra amin'ny tantara tantara an-tsary. Ny sarimihetsika dia nalaina sary an-tranonkala tsy misy afa-tsy teo amin'ny manodidina sy ny manodidina ny tranoben'i Dakota ao amin'ny 1 West 72nd Street ao Central Park.
Na dia manova ny anaran'ilay trano ho an'ny "Bramford" aza ilay sarimihetsika, dia io trano io ihany no nisy an'i John Lennon, mpikambana taloha Beatles teo aloha, ary teo no nipoitra teo amin'ny sisin-dalana teo akaikin'ny mpankafy azy.
Avy amin'ny Chowhound.com.
Inona moa i New York mihoatra noho ny mpilalao sarotra izay hanao zavatra ho an'ny asa tsara? Ity horonantsary ity, izay kintana an'i Dustin Hoffman sy Jessica Lang, dia mitantara ny tantaran'ny mpilalao sarimihetsika iray manao akanjo vehivavy, mba hahazoany asa amin'ny savily opera. Ilay sarimihetsika dia voatifitra tanteraka tao New York, ary nanan-kery ny toerana malaza toy ny efitra fandroana Rosiana.
I Will Smith dia ilay hany sisa velona tamin'ny aretina iray izay nahafaty ny ankamaroan'ny olona tany New York City. Ireo izay tsy maty dia niova ho biby goavam-be toy ny biby.
Ny sarimihetsika manontolo dia notifirina tamin'ny toerana tao New York City. Ny sehatra iray, izay nitifitra teo amin'ny Brooklyn Bridge, dia namoy ny famokarana $ 5 tapitrisa dolara. Anisan'ny toerana hafa anisan'izany ny tranon'ny Will ao Washington Park 11, Times Square, Central Park, ny Reniranon'i East, ny Herald Square, ny Tranombakok'i Metropolitan Museum, ny Park Avenue, ary ny USS Intrepid.
"Miresaka amiko ve ianao?". Via YouTube
Ny kintan'i Robert De Niro ao amin'ny sainan'i Martin Scorsese dia mpangalatra ara-psikolojika momba ny mpitsabo vetaveta saina iray ao Vietnam izay miasa toy ny mpamily fiarakaretsaka amin'ny alina ao an-dalan'ny New York City.
Nipoitra tanteraka tao an-tanàna, tsy fanontaniana mikasika ny toerana nisy ny ady an-trano tsy mahatsiaro an'i De Niro nandritra ny fizotran'ny sarimihetsika; Izany no toerana tsy nasongadina.
"Story Story West Side" dia mitantara ny tantaran'i Tony sy Maria, tsy ela akory izay, ireo mpifankatia manana kintana avy amin'ny andian-jiolahy ao New York. Io no "Rado sy Julia" malaza, natao ho an'ny mozika maoderina ho an'ny sehatra sy ny fisie.
Ankizivavy roa avy amin'ny andian-jiolahim-bahoakan'i New York no mifankatia, fa ny fifandirana eo amin'ny samy namany dia manorina amin'ny loza. Ny ankamaroan'ny sehatra dia voatifitra teny an-dàlambe: 68th Street eo anelanelan'ny Amsterdam Avenue sy West End Avenue.
Ny Muppets dia naka an'i Manhattan (1984)
Ny muppets an'i Jim Henson dia tsy mahavita manintona mihitsy, ary ny mahita azy ireo hijery ireo toerana marobe any New York dia mahafinaritra be. Ao amin'io endriny feno, Kermit The Frog sy ny nahazo diplaomam- batom -pirahalahiana ity ary manapa-kevitra ny hanandrana hanao izany ho lehibe ao NYC. Manao ny karazan'asa isan-karazany eny an-dalana izy ireo, miezaka mandresy lahatra ireo mpamokatra hametraka ny asany.
Misy toerana lehibe misy eto, anisan'izany ny tranon'ny Empire State, ny Pulitzer Fountain, ny trano fisakafoan'i Sardi, ny Cherry Hill, ny Central Park, ary ny Water Conservatory ao Central Park.
"Tsara ny filokana.". Via YouTube
"Wall Street" dia mitantara ny tantaran'ilay mpivarotra amboara (Charlie Sheen) izay nivadika ho mpanafika mpanafika mba handresena ny fanajany ny mpanolotsainy, Gordon Gekko (Michael Douglas). Notaterina sy nosoratan'i Oliver Stone ilay sarimihetsika notifirina tanteraka tao New York, anisan'izany ny tifitra teo amin'ny tena tany ambanin'ny tany tao New York Stock Exchange fa 45 minitra monja no nipetrahan'i Stone.
Anisan'ny toerana hafa anisan'ny lehibe indrindra ny Grand Ballroom ao amin'ny Hotel Roosevelt, ny Club Club 21, Tavaratra ao amin'ny toeram-pisakafoanana maitso ao Central Park, ary ny Foiben'ny Tafiky ny New York. Ireo bala rehetra ireo dia voatifitra tao amin'ny birao ara-bola tena izy tamin'ny 222 Broadway tao afovoan-tanànan'i Manhattan.
Tahaka ny maro amin'ireo sarimihetsika nataon'i Woody Allen, New York dia manana ny lazany manerana an'io tantara an-tsarin'ny mpanoratra televizionana nisara-panambadiana izay mampiaraka ny tovovavy tanora raha lavo amin'ny fitiavany ny tompovavy namany.
Ny toerana dia ahitana ny Fifth Avenue, The Museum of Solomon R. Guggenheim, Museum of History of Natural History, Bloomingdale's, Broadway, Central Park West, Hayden Planetarium, Museum of Modern Art, Bridge Queensboro, Dalton School, Dean and Deluca, Inc. ., ny Trano fisakafoanana Elaine, Empire Diner, Greenwich Village, John Pizzeria, Lincoln Center, Madison Avenue, New York Harbor, Park Avenue, Riverview Terrace, Bookstore Rizzoli, Fitaingan'ny Tea Room ao Rosia, Uptown Racquet Club, Museum of American Art , ary i Zabar.
Ataovy ny Zavatra Tsara (1989)
Ny tantaran'i Spike Lee momba ny fizarazarana ara-pirazanana eo amin'ny mpivarotra pizza Italiana iray ao amin'ny faritra mainty iray dia tena niasa tanteraka tamin'ny 1989. Ilay sarimihetsika dia voatifitra tanteraka tao amin'ny Stuyvesant Avenue, eo anelanelan'i Quincy Street sy Lexington Avenue ao amin'ny tanànan'i Bedford-Stuyvesant any Brooklyn. Ny ankamaroan'ny hetsika dia natao tao amin'ny Pazzeria malaza Sal, tena trano fisakafoanana ao amin'ny Lexington Avenue.
Ny "Fame" dia manaraka ny fiainan'ireo mpianatra zatovo izay manatrika ny High School of Performing Arts any New York, (fantatra amin'izao fotoana izao ho ny High School LaGuardia). Avy amin'ny famerenana amin'ny fizarana diplaoma, ireo tanora ireo dia miatrika olana tahaka ny fifanambadian'ny mitovy fananahana, ny fanalan-jaza, ny famonoan-tena ary ny tsy fahaiza-mamaky teny.
Ny mahaliana, ny sekoly tena tsy manaiky ny hamela ireo mpilalao horonantsary hitifitra na dia any ivelan'ny trano aza satria nihevitra izy ireo fa sarimihetsika loatra ilay sarimihetsika. Ireo mpilalao horonantsary dia nampiasa fiangonana iray nilaozany tamin'ny Lalana 46. Ny varavaran 'ny fiangonana dia nampiasaina ho fidirana ao amin' ny sekoly. Ny Haaren High School dia nampiasaina tamin'ny fiaramanidina anatiny.
Ny laharana dihy goavana dia voatifitra teo amin'ny Tendrombohitra West 46th teo anelanelan'ny 6 ka hatramin'ny faha-7. Jereo ity sary malaza eto YouTube ity.
Misy hetsika hafa atao any Times Square, Central Park West sy Broadway.
Ny iconic tsy maintsy-Jereo ny Alfred Hitchcock Films
Top 10 Best Movie "Switching Body"
Filma dimy momba MDMA
Top 10 Famoahana Identite Movies
Ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra sy ratsy indrindra
Mila watch Audrey Hepburn Movies
Ireo 10 Best Meg Ryan Movies
Top tsy maintsy hijery fanta-daza fanta-daza
6 Tandrefana Classic Nirosoin'i James Stewart
Ny Griffin amin'ny Architecture sy ny Design
Inona no tokony hataonao raha fantatrao fa misy mifraody ao amin'ny kolejy
Inona ny Lalànan'ny Hazo Ara-dalàna?
Torolàlana ho an'ny Fandalinana Manerantany ho an'ny tantaran'ny tontolon'ny siantifika
Biographie an'i Anton Chekhov
Ireo 10 Dinosauro tena manan-danja izay tsy mbola henonao hatramin'izay
Lisitry ny teny sinoa mahazatra indrindra
Sant Kabir (1440 hatramin'ny 1518)
Fomba 12 hanalavirana ny tady, snarl ary fanangonana
Ny Ghats of Varanasi
Beginner English Absolute - 20 Point Program
Ahoana no ampiasana ny môtô amin'ny zavakanto?
Nahita Ny 'Ball' Gulf Golf Tao Am-Trano Ianao - Inona ny Fitondràna?
Heterogène Definition (Science)
Manao antso an-tariby amin'ny firenena alemana miteny sy ny voambolana mifandraika amin'izany
Tantara fohy momba ny Roush Mustang
Tena sa sandoka? Horonan-tsary fanesorana an'i Obama
Hahazo "Betsaka ny fifanarahana" Tickets
Fanambarana ny fahaleovan-tenan'ny Patriotic
Sarin'i Diego de Almagro
Ny andian-tsoratra 10 voalohany amin'ny "Anjely efa renay" avy amin'ireo mpandinika Kristiana & Filazantsara